Kupfeka kudzidzira | Kupenda muongorori makosi | Ampp
KWEMAHARA KUSVIRA Portal ndeyekuti iyo yakasimba uye ine ruzivo Kurovedza uye Certification chikuva cheKutenderera Vanoongorora uye Painting Vanoongorora icho chiri chikamu cheHTS COATINGS. Inobata neindasitiri yekumonera inoenderana neSurface Kurapa, Bemhapemha mafomu, Painting Kuongorora, uye Nzira dzekuyedza
Iwo Ekumonera VaongororiKudzidzisa maModule akagadzirwa neRuzivo Rwemabhizimusi Ekumonera Nyanzvi uye Nyanzvi. Iyo bemhapemha nyanzvi kumashure kubva kuOiri, Gasi, Petrochemical, Marine, Kuvaka Ship, Heavy Maindasitiri. Vadzidzi vazhinji vanoshanda muOnshore, Offshore, Pipeline, Process Maindasitiri vakabatsirwa kubva muzvirongwa zveE-kudzidza izvi. Mukati menguva yemberi iri pedyo, isu tinosarudza kuunza makosi mazhinji akabatana nemamwe mabasa senge kupisa, Insulation, Fireproofing, Hot Dip Galvanizing, Thermal Spray, Refractories uye manejimendi, nezvimwe.
Kupfekedza Inspector's Basa Kufambira Mberi
Mushure mekupedza online kosi, iyo nyanzvi inogona kushanda seinotevera: -
Corrosion Kudzora Injiniya
QC / QA Muongorori
Anodzivirira Kudzivha Inyanzvi
Kupenda Kutadza Kuongorora Kunoongorora Nyanzvi
Bhenefiti Ye Online Coatings Kudzidziswa
Aya anotevera mabhenefiti aive akatsanangurwa zvine chekuita neInternet Coating Inspectors Kudzidziswa
E-kudzidza / Online modhi inowedzera mukana wevabatanidzi 24 X 7 & 365 mazuva. Ivo vanogona kushandisa uku online kudzidziswa kubasa / kumba / yekuzorora nguva / mazororo nekuwana nyore.
Maitiro epamhepo anoderedza visa / ndege / boarding & pekugara mutengo uchienzaniswa neOnsite mode. Zvakare, yako yekushomeka pabasa uye inotevera kurasikirwa kwemubhadharo kunogona kudzivirirwa.
Iwe uchafambisa iwo masiraidhi emakosi / hurukuro / mhenyu chats / mhenyu mavhidhiyo / Mibvunzo / migove isina yekumanikidzwa kuverenga kana kupedzisa. Iwe unosvetuka / kupera / kudzoreredza / kudzokorora chero zvikamu chero panguva chero nguva pasina zvirambidzo
ll kosi masiraidhi / zvemukati zvinogamuchirwa nehurukuro yekuteerera yekuwedzera ndangariro yevadzidzi. Izvo zvichayeukwa panguva yese chikamu chepamhepo makosi.
Makosi edu ese anotakura akakodzera miganho uye mibvunzo yekuvandudza ruzivo rwevadzidzi. Kuongorora kwenguva nenguva kunobatsira vadzidzi mukubvisa kupedzisa kosi yekupedzisira.
Yedu yepamhepo yekudzidzisa zvirimo zvinoenderana neInternational Inspector's curriculum. Yedu yepamhepo Yekudzidzisa ruzivo ichave inobatsira kubvisa ese epasi rose zvitupa bvunzo.
Mari Dzepasi Pasi Dzese
Kubva 2014, chirevo cheHTS COATING ndechekuendesa dzidzo yemhando yepamusoro muindasitiri yekumhara Yekutarisa uye zvikamu zveKushandisa. Naizvozvo iyo Kosi uye bvunzo bvunzo inogara iri yemakwikwi uye yakaderera kana ichienzaniswa neanenge aripo ekudzidzisa vapi.
HTS COATINGS nyanzvi mapiyona muIndasitiri Yekushandisa Kushanda uye Kuongorora zvikamu. Nekudaro, edu ese makosi uye zvirimo zviri kuendesa neakagadziridzwa uye azvino ekumesa matekinoroji vhezheni.
Online Kupfekedza Kunobatsira neHTS COATINGS
Vadzidzi vazhinji vakawana isingagutsi yenguva pfupi vachiri kuenda kuInternational Inspector Kudzidzisa makosi. International Certification vanopa seFROSIO / SSPC / NACE / BGAS / ICORR inopa akasiyana siyana masitifiketi. Nekuda kwenguva pfupi yeaya epasi rose makosi, Vadzidzi vanoda mamwe ekugadzirira makirasi. Nekudaro, ivo vari kuda mune yega yega yekudzidzisa uye zvitupa zvirongwa. (Kupfekedza Inspector kudzidzisa / Frosio Kucheka Inspector / SSPC Inspector / Frosio Certification / Painting Inspector)
Kukunda kudzidziswa kwenguva pfupi, Online Kupfeka kwakagadzira ino webhusaiti kune akasiyana ekugadzirira makosi akanyatso HTS COATINGS. Iyi E-yekudzidza chikuva zvakanyatso gadzira chitsauko chega chemudzidzi kunzwisisa kuri nyore kwekupenda kuongorora tekinoroji. Zvino, isu takawedzera SSPC uye FROSIO zvine chekuita nezvirongwa zvekugadzirira. Munguva pfupi, isu tinowedzera mamwe mapurogiramu anoenderana nesarudzo dzemudzidzi.
ONLINE COATINGS uye HTS COATINGS, inoshuvira vadzidzi vedu vese kuti vaite basa iri nani mukupfuurira muOri, Gasi, Petrochemical, uye Nzvimbo Dzinorema.
PAMUSORO PENYAYA DZESVONDO ZVINOGONESA
Vateveri Vemamwe Marudzi
ISO / SSPC Maitiro Vashandisi Pasi Pose
Copyright © 2021 Online Machira | Powered by Astra WordPress Dingindira